Wershadaha Gooyaha Gooyaha - Shiinaha Gooyaha Soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha
Qalabka wax lagu gooyo micnaheedu waa wax badan muuqaalka guud ee dajinta miiskaaga, adoo ku daraya jawi iyo raaxo cunto kasta, waxay ka tarjumaysaa aragtida nolosheena xitaa bulshada oo dhan. Pretty Shiny Gifts Inc., waxay siisaa noocyo kala duwan oo gogol -goyn ah oo ay ku jiraan darajada sare ee cuntada 304 mindiyo birta ka samaysan, fargeeto, malqacado, caws oo kugu waari doona intaad nooshahay, ama isbeddelkii ugu dambeeyay iyo qaababka baalasha PLA ee nooleyn kara, sanduuqyada qadada cawska cawska ah in caawinta dhulka si cad berri. Dhammaan agabyadu waa FDA la oggolaaday, oo ku fiican guriga & jikada, iyo sidoo kale makhaayadda & baarka, iskuulka ama socdaalka dibedda laga soo xushay xirmooyin googo'an oo isku dhafan. Wuxuu ku yimaadaa qaabab kala duwan si aad u hesho waxaad rabto, iyadoo aan loo eegayn munaasabadda, waxaanna leenahay xulashooyin badan koorso kasta. Iyada oo leh baaxaddan cajiibka ah waxaad miiskaaga ku qurxin kartaa gogosha cusub ee SJJ, xardho caado ama astaan ​​daabacaad ayaa si diiran loo soo dhoweeyay. Nala soo xiriir hadda si aad ugu darto waxoogaa qaab ah miiskaaga cashada oo leh gogol goynteena!
Koobabka Cabitaanka Caaga Dib Loo Isticmaali Karo
Waraaqaha Biyo -kobcin kara
Qalab Qalabaynta Birta ah
Cube Baraf ahama
Bakhti -ku -taagga PLA -ga
Dhuxulo birta ah
Sanduuqa Qadada ee Caws Qamadi ah, Agabyada wax lagu gooyo